Soba : Fakkiiwan kun US Itoophiyaaf meeshaa kennuu ishii hin argisiisu | Addis Zeybe - Digital Newspaper
Soba : Fakkiiwan kun US Itoophiyaaf meeshaa kennuu ishii hin argisiisu
Hagos Gebreamlak, Naol Getachew•October 10, 2021
“Mootuumman US dhihoo kana meeshaa miliiyoona $2.9 ta’uu RIB Itoophiyaaf kennite” jachuun Fuulli Feesbuuki gaafa guyyaa Fulbaana 26, 2014 ALI maxxanse.
Maxxansichii Fakiilee Konkolatoota mul’iisaan lama fayyadameera. Dabalataanis Biyyi itoophiyaan hojii Al-shabab ittisuuf deegaruuf olaa ka jadhuu yoo ta’u, yeroo 10 ol qoodameera.
Haata’u malee HaqCheck poosticha hubatee fakkiileen kun akkuma jadhameeti waan hin ibsineef Soba jadhee ramadeera.
Mootuummaan US seenaa Gargaarsa Itoophiyaaf keenuu qaba. Biyyi Itoophiyaan US waliin yeroo Mootichaa, yeroo Loola Qorraa fi miidhaa shororkeesitoota 9/11 booda michuu ta’uun beekkamti. Al-shabab rukutuu irrattis US gargaarsa goochaa turuu ishii ni beekkama.
Haata’uu malee Faakkiileen kun akkuma jadhameetti Mootuumman US yeroo dhihoo kana meeshaalee Itoophiyaaf deegaruu ishii in agarsiisu. Fakiileen kun ka ibsaniis Ameerikaan Itoophiiyaaf gargaarsa goochuuf yeroo Wagga dura ibsamuu isaa mul’isa. Koonkoolaatoonifi Ambulaansiin suuraa irratti mul’atan Dipartimenti Militarii Ameerikaan Itoophiyaaf Fulbaana 19, 2013 ALI Deegaruu isaa agarsiisa. Meeshaaleen kuniis miliyoona $2.9 kan basaan yoo ta’an Al-shabab Ittisuuf oolu.
Fakkin duraa dhaabbani Miidiiya Yunaytid Arab Imreet ka ta’e Al Ain ka maxxansedha.
Waliigalaan Itoophiiyaan yeroo dhihoo kan mootuumma US irraa deegarsaa loola akka argatee waan hin agarsiisneef HaqCheck maxxansicha Soba jadhee dhuugoomseera.